Wararka - Isboortiga ragga iyo dumarka isboortiga silhouette
2022 deyrta hore waxyaabaha labiska labka iyo dhadig ee labiska dumarka waxaa saameyn ku leh pragmatism, waxayna fiiro gaar ah u yeelan doontaa qaabka moodada waana la gashan karaa dhowr jeer; ku dhiirrigelisay walxaha ku habboon isboortiga ee deyrta 2021 iyo xilliga cusub ee xilliga qaboobaha, si qoto dheer u qodo taxane kala duwan oo ah noocyo kala duwan oo isboorti mooddo Fashion ah silhouettes suits. Xirmooyinka jimicsiga isdabajoogga ah ayaa la gashan karaa dhowr jeer. Naqshadeynta jilicsan ee jilicsan iyo jajabnaanta moodada waxay kordhisaa dareenka macaamiisha ee dabacsanaanta iyadoo qoyan badan; dhalaalka dharka jilicsan iyo dharka jilicsan ayaa soo bandhigaya qaab raaxo-yar oo raaxo leh ciyaaraha isboortiga. Suudhka guriga ee raaxada leh wuxuu dammaanad ka qaadayaa raaxada adoo ku daraya naqshado faahfaahsan oo faahfaahsan iyo isbeddello muuqaal ah si loo daboolo baahiyaha iyo ficil ahaanta xirashada muuqaalka badan; isbeddelka ku habboonaanta retro waa mid aad u kala duwan oo firfircoon muuqaal ahaan, oo wax badan u keenaya retro-ka 90-kii Naqshadaynta naqshada.
Dhammaan noocyada kala duwan ee dharka isboortiga moodada ah ayaa laga sifeeyey bandhiggii ugu dambeeyay ee xilliga dayrta iyo jiilaalka ee 2021. Waxaa jira suudooyin isboorti oo kala duwan sida qaabka tikniyoolajiyadda mustaqbalka, qaabka shaqeynta qabow, isbeddelka dariiqa sare iyo moodada retro; hoosta, waxaan ku qori doonnaa dhowr nooc oo isboorti ah oo faahfaahsan oo ku saleysan sawirka. Falanqaynta qotada dheer ee ku habboon ayaa siin doonta dhiirigelin loogu talagalay naqshadeeyayaasha si ay u horumariyaan dharka isboortiga ee moodada hore ee dayrta 2022.
Dawaarka lebbiska iyo xirashada ayaa ah habab cusub deyrta hore ee 2022, kuwaas oo loo adeegsado isboortiga moodada ah si loogu daro waxyaabaha muhiimka ah; ka dib jimicsiga gudaha, waxaad si toos ah u gashan kartaa funaanado gaaban ama dhexda dharka hoose ee isboortiga si looga fogaado ceebta in aad aad u qaawdo Isla mar ahaantaana, waxay kordhisaa sharraxaadda waxayna ku guuleysataa wax ku oolnimada u beddelashada muuqaallada kala duwan ee hal dhar. Dacwada noocan ah waxay u baahan tahay fiiro gaar ah deyrta hore ee 2022.
Habka naqshadeynta fiiqan waa hab cusub oo cusub deyrta hore ee 2022. Waa mid jilicsan oo la kala qaadi karo iyada oo ay koontaroolayaan macaamiisha, taas oo ku habboon xakamaynta heerkulka, xakamaynta bilicsanaanta iyo kordhinta waxqabadka sheyga kaliya; sida bilaabiddi udambeysay ee Adidas xilli ciyaareedka cusub ee 2021 iyo diva-ga Mareykanka. Jaangooyada qaabka hoose ee taxanaha wadajirka ah waxay leedahay tolmo jilicsan oo kala go 'ah dhexda iyo cidhifka, taas oo hagaajin karta dhererka hoose iyo xitaa cirifka dillaacsan waxaa loo isticmaali karaa sida shaashad moodada ah, iyadoo la ogaanayo suurtagalnimada in qaabab badan lagu xidho hal dhar ; Qafiska gacmaha, daaweynta kala-goyska ee xusulka wadajirka ah waxay ku guuleysan kartaa wada noolaanshaha ficil ahaanta iyo quruxda qurxinta.
Farsamaynta kala-bixinta ayaa lagu xusay marar badan dhar-diyaarsiga iyo dharka isboortiga. Xilli ciyaareedkan, diiradda ayaa saaran farsamada kala bixida ee isku midab isku mid ah; kala-soocid dhar suuf ah oo si yar loo buunbuuniyey ama qurxin u eg qaab kubbadeed dhinacyada dhinacyada gacmaha Waa hal abuur. Marka labaad, tolida midabka dhalaalaya ee la hagaajin karo ayaa lagu sameeyaa jirka sariirta si loo kordhiyo xiisaha macaamiisha ee ciyaarta. Isla mar ahaantaana, qaababka midabka dhalaalaya ayaa lagu samayn karaa shabaqa gudaha si kor loogu qaado dareenka qurxinta.
Dharka jilicsan ee jilicsan ayaa soo jiidaya wax yar oo dhalaalaya, taas oo u keenta raaxo qafiif ah dharka guud. Marka lagu daro silhouette dharka isboortiga, waxay sare u qaadeysaa quruxda moodada iyadoo lagu saleynayo hubinta raaxada isboortiga; marka labaad, dharka isdaba jooga ah iyo dharka dhalaalaya ee corduroy ayaa labaduba asal ah xulasho Wanaagsan oo qaab ah.
Guryaha xilliyeedka raaxada leh ee xilli ciyaareedka cusub waxay fiiro gaar ah siinayaan isbedelka muuqaalka iyo quruxda faahfaahinta iyadoo lagu saleynayo hubinta waxqabadka raaxada. Naqshadeynta buunbuuninta ee silsiladda, qurxinta dhexda iyo jarista lugaha surwaal dhammaantood waxay tarjumayaan baahiyaha quruxda guriga xilliga deyrta hore ee sannadka 2022. Noocyo kala duwan oo kor iyo hoos ah ayaa la soo bandhigi karaa si loo kordhiyo dareenka dhaqdhaqaaqa guriga.
Dareenka gadaal ayaa boos ku leh bandhigga dayrta ee 2021 iyo xilliga qaboobaha. 2022-ka horraantii hore ee dib-u-celinta waxay dareemeysaa in isboortiga loo xaglinayo dhinaca aragtida muuqaalka lebiska dugsiga. Suudhka cagaaran ee qurxinta cagaaran ee cusub iyo iftiinka qurxinta wuxuu ku darayaa dareen qabow oo dhalaalaya taxanaha; isla mar ahaantaana, taxanaha dib-u-casaanka iyo buluugga ah tolidda iyo isku-xidhka websaydhka ayaa dadka ka dhigaya inay dareemaan inay yihiin 90-meeyadii; Suudka isku daraya goonnada nuska ah iyo jaakada la jarjaray ayaa u xuubsiibtay da 'yarnimo iyo moodel muuqaal ahaan.